Fikarohana Nahomby Nataon’ireo Mpianatra Siantifika Burkinabe sy Borondey Iadiana Amin’ny Tazomoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2015 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Română , Aymara, 日本語, Français, bahasa Indonesia, Ελληνικά, Italiano, English
Pikantsary tamin'ny lahatsarin'i Niyondiko sy Dembele nandritra ny fampahafantarana nataon'izy ireo tamin'ny foaran'ny Mpanao zavatra tao Roma, Novambra 2014
Tsy mila mandany an-tapitrisa dolara ny fiarovana ain'olona an'arivony. Nampiseho ireo mpianatra roa avy aty Afrika vao haingana fa 59 cents ihany dia ampy hanavotana ain'olona, ​​ary tsotra tahaka ny baran-tsavony ny vahaolana .
Mpianatra ao amin'ny Ivontoerana Iraisampirenena Mpanao Fikarohana Momba Ny Rano sy ny Tontolo Iainana ao Ouagadougou, Burkina Faso i Moctar Dembele, teratany avy ao Burkina Faso, sy Gerard Niyondiko, teraka tao Burundi. Tsy vahiny amin'ny loza ateraky ny tazomoka, izay mahafaty olona betsaka indrindra aty Afrika Atsimon'i Sahara, i Dembele sy i Niyondiko. Isan-taona manerana izao tontolo izao, eo amin'ny 600,000 eo ireo olona matin'ny tazomoka - aretina avy amin'ny bibikely ary mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka mitondra ny otrikaretina. Ny soritr'aretina matetika dia ahitana fanaviana, harerahana, fandoavana, ary aretin'andoha.
Mba hisorohana ny aretina, namorona savony vita amin'ny bozaka sy fangaro voajanahary ao an-toerana i Dembele sy Niyondiko, tahaka ny diberana Shea (karité) sy menaka veromanitra, izay mampandositra moka mitondra ny otrikaretina. Nantsoin'izy ireo hoe “Faso soap (Savony Faso)” izany. Mba ho mora ampiasaina sy takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra no anton'ny fikarohana:
Mba hanampiana azy ireo amin'ny fikarohana vitan'izy ireo, nahazo loka $26,500 avy amin'ny Fifaninanana “Global Social Venture” an'ny UC Berkeley i Dembélé sy i Niyondiko .
Somary tsotra ny siansa niavian'ny hevitra, araka ny fanazavan'i Hugo Jalinière, mpanao gazety ara-tsiansa ao amin'ny Sciences et Avenir, gazetiboky Frantsay miresaka siansa:
Ahitana toetra roa ny fomba fiasan'ny savony: ny fofony izay mandroaka ny moka ary ny singa ao anatiny izay mamono ny olitra sy misakana ny fihanak'izy ireo ao anaty rano mihandrona. Mahavelom-panantenana ny andrana natao tamin'ireo mponina tao Ouagadougou [renivohitr'i Burkina Faso] .
Araka ny filazan'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamana (OMS), eo amin'ny 200 tapitrisa eo ny trangan'aretina tazomoka isan-taona, izay miteraka fahafatesan'olona eo ho eo amin'ny 660.000 eo. Tsy mbola misy ny vakisiny iadiana amin'ny tazomoka, fa marobe ny fanafody miady amin'ny tazomoka azo ampiasaina hitsaboana ireo karazana soritr'aretina. Betsaka ireo fepetra fisorohana ny aretina, saingy tsy misy ny fiarovana feno iadiana amin'ny moka mitondra katsentsitra ary anisan'ireo fepetra fisorohana ampiasaina ao amin'ny faritra ny zavamaniry mandroaka moka.
Efa nanao fikarohana lalina momba ireo zavamaniry mandroaka moka ny manampahaizana. Sarah Moore, manampahaizana avy ao amin'ny Sekolin'ny Fahadiovana ara-pahasalamana sy ny Fitsaboana any amin'ny Tany Mafana ao Londra no miteny fa lavitry ny fahombiazana ara-panandramana ny vokatry ny fikarohana momba ireny zavamaniry mandroaka moka ireny, saingy malaza eo amin'ny olona ny fampiasana azy noho ny hevitra mitombina amin'ny fandraisana fepetra mitovy amin'izany:
The field of plant-based repellents is moving forward as consumers demand means of protection from arthropod bites that are safe, pleasant to use and environmentally sustainable. It is also extremely fertile due to wealth of insecticidal compounds found in plants as defences against insects. The modern pyrethroids that are the main stay of the current malaria elimination program that is making excellent progress are harmless to mammals.
Mandroso ny sehatry zavamaniry [mandroaka moka] noho ny fitadiavan'ny mpanjifa zavatra mampilamin-tsaina miaro amin'ny kaikitry ny bibikely, mahafinaritra ny fampiasana azy ary miaro ny tontolo iainana amin'ny fomba maharitra. Mahavokatra be ihany koa noho ny fahabetsahan'ny fangaropamonoam-bibikely hita amin'ny zavamaniry natao iadiana amin'ny bibikely. Ny fangaro sentetika maoderina izay fototra voalohany amin'ny programam-pandripahana tazomoka amin'izao fotoana izao dia tsara fandroso indrindra fa tsy manohintohina ny biby mampinono.
Pikantsarin'ny Sarintanin'ny angon-kevitra momba ny fanafody Artemisinin eto Afrika amin'ny alalan'ny WWARN
Fantatr'i Dembélé sy i Niyondiko amim-pangirifiriana ihany koa ny vatomisakana ara-toekarena misy amin'ny ady amin'ny tazomoka. Ny Tanindrazan'i Niyondiko, Burundi, amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny krizy mahaolombelona mahafadiranovana ary firenena mitana ny laharana faha-167 amin'ny firenena 177 eo amin'ny Fandaharan'ny Firenena Mikambana amin'ny Fampandrosoana ny Mahaolombelona [UN Human Development Index]. I Burkina Faso indray vao nisedra fikorontanana ara-politika ary tokotokony ho ny antsasaky ny mponina no mivelona ambanin'ny 1,25 dolara US isan'andro.
Tsy maintsy takatry ny besinimaro ny vahaolana maharitra iadiana amin'ny tazomoka eto Afrika, amin'ny fahitana ny tantara sy ny tolona mbola atrehin'ny faritra. Tamin'ny fananana izany tao an-tsaina no nikarohan'i Dembélé sy Niyondiko endrika savony Faso ho moravidy araka izaitratra.
Tonga amin'ny fotoanany indrindra ny tetikasa araka ny fampitandremana vao haingana navoakan'ny Tambajotra Manerantany Miady amin'ny Tazomoka ho an'ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana fa miakatra ny tahan'ny tsy fahalairan'ny fanafody artemisinin miady amin'ny tazomoka ny aretina:
Tahaka ny tamin'ny febroary 2015, voamarina tany amin'ny firenena dimy fa tsy laitran'ny artemisinin ny aretina. [..] Any amin'ny ankamaroan'ireo toerana nozahana dia mbola sitrana ihany rehefa notsaboina ireo mararin'ny moka tsy laitran'ny artemisinin, ka heverina fa fanafody nampiarahana aminy no itsaboana azy ireo. Saingy any amin'ny sisintany manasaraka an'i Kambodza sy Thailandy dia lasa tsy laitran'ny saika fanafody tazo rehetra ny P. falciparum. Misy ny fanahiana fa hipongatra ihany koa ny moka tsy laitram-panafody maro any amin'ny zanaparitra hafa.
Mahafantatra i Dembélé sy i Niyondiko fa mbola lavitra ny lalana, saingy efa niteny ry zareo fa efa vonona amin'ny ady hafa. Nilaza i Dembélé fa mihoatra noho ny fandavoana ny aretina ny ady; natao hanome fanantenana mamirapiratra ho an'i Afrika amin'ny hoaviny manokana ihany koa io. Taorian'ny nahazoany loka avy amin'ny UC Berkeley, dia niteny izy hoe:
Tena faly tokoa aho fa lasan'i Afrika ary indrindra lasan'i Burkina Faso ity loka ity. Sambany no tsy amerikana ny ekipa nahazo ity loka ity. Reharehan'ny tanora izany, rehareha ho an'i Afrika. Tokony handrisika ny tanora handroso ny tahaka itony.